ကောင်းမွန်စွာ အရွယ်ရောက်စေရန် ဘာကြောင့် ကောင်းမွန်စွာ စားသုံးသင့်သလဲ? | Ensure
ကောင်းမွန်စွာ အရွယ်ရောက်စေရန် ဘာကြောင့် ကောင်းမွန်စွာ စားသုံးသင့်သလဲ?
အစာစိမ်းစနစ်၊ အရည်သောက်စနစ်၊ ကီတိုစနစ်၊ ပလေအိုစနစ် ကဲ့သို့သော စားသောက်နည်းနှင့် စားသောက်ပုံ အစီအစဉ် စနစ်အမျိုးမျိုး ရှိလာသည်နှင့်အမျှ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးအနေနှင့်၊ သက်ကြီးပိုင်းတို့အနေနှင့် မည်သည့် အစားအသောက်စနစ်ကို ရွေးချယ်စားသောက်ရမှန်း ရှုပ်ထွေးနေတတ်သည်။ သို့သော် ထိုအစားအသောက်စနစ်များ၏ တူညီသော ဦးတည်ချက်တစ်ခုမှာ သင်၏ရွှေရောင်လွှမ်းသော အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားတွင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေရန်သာ ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သော စားသောက်ပုံ အလေ့အကျင့်ကောင်းများနှင့်အတူ သက်ကြီးပိုင်းများသည် သက်ရှည်ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ပြီး ဖျားနာခြင်း၊ ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို လျှော့ချပေးခြင်း၊ နှေးကွေးစေခြင်းတို့ဖြင့် သက်တမ်းစေ့ နေနိုင်လာစေရန် ထောက်ပံ့ပေးသည်။
သက်ကြီးပိုင်းတစ်ဦး အစာကောင်းကောင်းမစားလျှင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ?
သင်အသက်ကြီးလာသည့်အခါ တစ်ခါတစ်ရံ သင့်တွင် နှလုံး၊ အဆစ်၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်းနှင့် အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းလာခြင်း စသည့် ပြဿနာများ ဖြစ်လာသည်။ အာဟာရပြည့်ဝစွာ မစားလျှင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ကြွက်သားများ ဆုံးရှုံးခြင်း ပိုမိုမြန်ဆန်လာပြီး ကြွက်သားတစ်ခုဖြစ်သော သင့်အစာအိမ်သည်လည်း အစာစားချင်စိတ်ကို လျော့ကျလာရကာ အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုပါ အားနည်းစေပြီး အနာမကျက်ခြင်း၊ မူးမော်ခြင်းလက္ခဏာများနှင့် ချော်လဲခြင်း၊ ရေရှည်ဆေးရုံတက်ရခြင်းနှင့် အဆိုးဆုံးက သက်တမ်းတိုပြီး ဘဝအခြေအနေ မကောင်းမွန်ခြင်းတို့ဖြစ်ရသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ကြွက်သားများ အလုပ်လုပ်ပုံမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှ Lucien(အမိုင်နိုအက်ဆစ်တည်ဆောက်ပေးသော ပရိုတင်းထု) ကို ကနဦးခွဲထုတ်ပြီးမှ ပေါင်းစပ်ကာ ပြန်လည်ဖန်တီးသည်။ ထိုအရာများသည် တစ်နေကုန် သင်မသိဘဲ ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ပရိုတင်းကို သင်တွေ့လျှင် မည်သည့်အရာကို ပြေးမြင်သလဲ? အစားအသောက်ပါပဲ။
က။ နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာမည် – သင်၏ နှလုံးသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ သွေးများစီးဆင်းခြင်းကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ၎င်းသည်လည်း ကြွက်သားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်စွဲလမ်းနှစ်သက်လာသော အစားအသောက်များ (ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သော)က သင့်အား သက်လုံလျော့ခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေကြောင်း သတိထားမိလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၆၅ နှစ်နှင့် အထက် သက်ကြီးပိုင်း၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံကျော်မှာ အဝလွန်သည်ကို တွေ့ရသောကြောင့် အသက် ၄၀ ခန့်မှစပြီး ကျန်းမာသော အစားအသောက်များကိုသာ စားသုံးသင့်သည်။ သက်ကြီးပိုင်းတွင် အဝလွန်ခြင်းမှာ သင့်အား အပိန်လွန်ခြင်းသကဲ့သို့ ထိခိုက်နိုင်သည်။ အဝလွန်ခြင်းရော၊ အပိန်လွန်ခြင်းကပါ လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ နှလုံးကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေရန် အသီး၊ အရွက်၊ အဆီနည်းနို့၊ အရေခွံမပါသော ကြက်သား၊ ငါး၊ အစေ့၊ ပဲတောင့်ရှည်နှင့် သံလွင်ဆီတို့အား သင့်တင့်မျှတစွာ စားသုံးရမည်။
ခ။ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းမွန်လာစေသည် – သင်၏ ဦးနှောက်သည် ကြွက်သားမဟုတ်သော်လည်း ကြွက်သားနှင့် တူညီသော လက္ခဏာများရှိသောကြောင့် ၎င်း၏ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းလျှင် ရေရှည်သက်ကြီးပိုင်းတွင် မှတ်ဉာဏ်ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေမည်။ မှတ်ဉာဏ်အကြောင်းပြောလျှင် သက်ကြီးပိုင်းများသည် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကို စိုးရိမ်ပြီး ထိုရောဂါကို မဖြစ်အောင်၊ လျော့နည်းနှေးကွေးလာအောင် ပြုလုပ်၍ ရမရကို သိချင်လာကြသည်။ အဆိုပါရောဂါသည် မှတ်ဉာဏ်ကိုတင်မဟုတ်ဘဲ သိမှုလုပ်ဆောင်ချက်များ (Cognitive Function) ကို ထိခိုက်စေသည်။ အဆိုပါရောဂါသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဗီတာမင် B12 လုံလောက်စွာမရရှိလျှင်၊ ဆီစားများလျှင်၊ ပေါင်မုန့်အဖြူ၊ သကြားများသော ဆိုဒါ၊ မာဂျရင်းလွန်ကဲလျှင် ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ Antioxidant များသော အသီးများဖြစ်သည့် ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဘလူးဘယ်ရီ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ နနွင်း၊ နို့၊ လတ်ဆန်သောငါးနှင့် ရွေးချယ်ထားသော အသားနည်းငယ်တို့အား များများစားသုံးပါ။
ဂ။ သင့်ကြွက်သားများကိုလည်း ကူညီပေးနိုင်သည် – သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ အရေးကြီးအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည့် Lucien ကို ဖြိုခွဲသည့်အခါ သဘာဝအလျောက် ​ HMBပမာဏ အနည်းငယ် ကို ရရှိပြီး ပရိုတင်းကြွယ်ဝသော စားအစာများဖြစ်သည့် နို့၊ ဒိန်ချဉ်နှင့် အသီးအမျိုးမျိုး၊ ပဲစေ့နှင့် လိုအပ်သည့်ဖြည့်စွက်စာများမှလည်း ရရှိနိုင်သည်။ ထိုအရာသည် လူတစ်ယောက်၏ ကြွက်သားတည်ဆောက်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လိုအပ်သော အရာဖြစ်သည်။ HMB သည် ကြွက်သားထုကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ဖြိုခွဲမှုကို နှေးကွေးစေသည်၊ ထိုအရာသည် သက်ကြီးပိုင်းများ လှုပ်ရှားမှုအတွက် အလွန်အရေးပါသည်။ မျှတသော အစားအသောက်ကို ရရှိရန်ခက်သည်ဟူသော သင့်လိုလူများထက်စာလျှင် အစာဝါးရန်ခက်ခဲသော သက်ကြီးပိုင်းများက ပိုမိုခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် အကြံပေးရလျှင် ပုံမှန်အစားအသောက်တွင် အာဟာရပြည့်ဝသော ဖြည့်စွက်စာများ ထည့်သွင်းစားသုံးသင့်သည်။ Ensure Gold သည် အမှုန့်ပုံစံပြုလုပ်ထားပြီး လိုသလို သောက်သုံး၍ရသလို အသင့်သောက် အထုတ်ပုံစံနှင့်လည်း လာပြီး သက်ကြီးပိုင်းများအနေနှင့် နေ့စဉ်သောက်သုံးရန် ညွှန်ကြားထားသော ပမာဏကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် Ensure Gold တွင်ပါဝင်သော ပရိုတင်း HMB တို့က ကြွက်သားများကို ပြုပြင်ပေးနိုင်သည်။ ဗီတာမင် D သုံးဆ ပိုမိုပါဝင်ပြီး လိုအပ်သည့် Fattly Acid Omega3နှင့် အခြား ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ် ၂၈ မျိုးပေါင်းစပ်ပါဝင်သောကြောင့် သက်ကြီးပိုင်းများအား သန်မာစွာ နေထိုင်နိုင်ပြီး သူတို့နှစ်သက်သည့် အရာများကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။